« Jesoa Kristy : Mpanjaka fantsihana amin’ny hazofijaliana » - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Alahady 28 marsa 2021
Alahady SAMPANKAZO B
Mk. 11,1-16 (prosesiô); Iz. 50,4-7; Fil. 2,6-11; Mk. 14,1 – 15, 47
"Jesoa Kristy : Mpanjaka fantsihana amin’ny hazofijaliana "
Mpanjaka mitaingina ampondra ! Avy ao Betania, vohitra akaikin’i Jerosalema, i Jesoa no hobin’ny vahoaka sy ny mpianany. Ny fihetsika rehetra nataon’izy ireo : ny ampondra voatokana, ny fitafiana novelarina amin’ny lalana homban’i Jesoa, ny rantsan-kazo nahofahofa, fa indrindra ny teny fihobiana « Hozàna, Hosoavina anie… », dia samy manambara fa ankatoavin’ny vahoaka sy ny mpianany ny maha mpanjaka, taranak’i Davida mpanjaka an’i Jesoa. Tanteraka ao Aminy ny tenin’ny mpaminany Zakaria hoe : « Manaova feo firavoravoana, ry zanakavavin’i Jerosalema. Fa indro ny Mpanjakanao avy ho aty aminao,…, manetry tena mitaingina ampondra, dia ampondra tanora, zanak’ampondravavy » (Za. 9, 9)
Ao anatin’izany volon’andro fety fametrahana mpanjaka amin’ny toerany izany anefa no idiran’i Jesoa tsikelikely ao amin’ny fijaliany sy ny fahafatesany. Eny mpanjaka an’izao tontolo izao izy, hanaiky sy hankató azy avokoa izao rehetra izao eny fa na ny fijaliana sy ny fahafatesana aza. Saingy mbola zavatra maro mampalahelo sy mampangoraka no nitranga nanomboka teo amin’ny Sakafo farany niarahan’i Jesoa tamin’ny mpianany ka hatramin’ny namantsihana Azy teo ambony hazofijaliana.
Mpanjaka namorona ny Eokaristia. Nandritra ny sakafo farany no namoronany ny Eokaristia. Santatra sahady ny misterin’ny Paka. Ny mofo novakiana tamin’io sakafo io no nambarany fa « vatany » ; ny divay niarahana nisotro tamin’ny kalisim-pisaorana no nataony hoe « ràny ». Teo amin’ny sakafo farany àry no nanambaran’i Jesoa tamin’ny mpianany fa vonona Izy ny hanolotra ny vatany sy handatsaka ny rany ho famonjena ny olombelona rehetra.
Mpanjaka niady aina tao Getsemany. Asongadin’ny evanjely manokana ny tebiteby sy tahotra, ahiahy sy horohoro niainan’i Jesoa tao Getsemany. Naborany tamin’ireo mpianany izany « Ory ny fanahiko ka hila hahafaty ahy… » hoy Izy. Nitalahoany niankohoka nivavaka tamin’ny Ray izany: « Abà Raiko, azonao atao ny zavatra rehetra, ka aoka tsy hikasika Ahy ity kapoaka ity… ». Talahon’olombelona mila namana izaràna ny manjo, ny alahelo tsy ambara havana mantsy, hono, zakan’ny tompony ihany. Vavaky ny olombelona mitady izay sitrak’Andriamanitra Ray fa tsy ny sitrapon’ny tena. Tsy misakana ny fanehoana izay irîna anefa izany sady manankina sy matoky tanteraka ny fitantanan’Andriamanitra Ray.
Mpanjaka nisy namadika. Mpanjaka voasambotra sy niatrika fitsarana ary nanaiky hatramin’ny farany. Tanterahin’ireo manampahefana jody ny fiokon’izy ireo hisambotra an’i Jesoa. Niara-niasa tamin’izy ireo i Jodasy, iray amin’ny mpianatra. Neken’i Jesoa ny famadihan’i Jodasy Azy. Neken’i Jesoa ny fisamboran’ny Jody Azy. Neken’i Jesoa ny fandaozan’ny mpianany Azy. Neken’i Jesoa ny nandavan’i Piera in-telo ho tsy nahalala Azy. Neken’i Jesoa ny vesatra noforonina hanamelohana Azy : mpandrava ny Tempoly sy mpitonon-tena ho Kristy Izy ary mpiteny ratsy an’Andriamanitra ka mendrika ho faty.
Mpanjaka voaheloka ho faty fantsihana eo ambony hazofijaliana. Tsy manam-pahefana hanameloka ho faty anefa ny Jody satria zana-tany romanina. Ny goverinora romanina, Pontsy Pilaty, no nanolorana an’i Jesoa hanatanteraka ny didim-pitsarana. Fa inona ny ratsy nataony? Hoy i Pilaty. Ny vahoaka no nanome hevitra ny goverinora Pontsy Pilaty hamantsika an’i Jesoa amin’ny hazofijaliana satria nanao ny tenany ho mpanjaka Izy. Fitsaram-bahoaka no niafarany. Mahazo midaroka sy mikapoka ary milalao sy manaraby Azy daholo ireo miaramila kely efa mba niaritra daroka sy kapoka ary fanambaniana ihany koa: Arahaba, ry Mpanjakan’ny Jody, hoy izy ireo mananihany... Ny fanaon’ireo ambony noho izahay aminay no indro mba ataonay aminao koa ankehitriny. Zaranay aza mba misy hanamparana...
Arahaba, ry Mpanjakan’ny Jody... Eny, Mpanjaka Izy ary ny filazana ny anton’ny namonoana Azy dia voasoratra hoe : MPANJAKAN’NY JODY…
Indro ny Mpanjakanao avy ho aty aminao, …, manetry tena mitaingina ampondra, dia ampodra tanora, zanak’ampondravavy. Ry Jesoako, mba manjakà ao am-poko mandrakizay.